Archdiocese of Mandalay blog: အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း(၆)
ဆရာတော်မယ်ဇာဘာရ်ဘားသည် သာသနာပြန့်ပွားရေးဌာနချုပ်မှ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျုးဇက်ပေ ဗီတိုးနီ (Father Giuseppe Vittoni) အား ကာလ်ချီ၏လက်ထောက်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်မယ်ဇာဘာရ်ဘား၏ စီမံခန့်ခွဲမှု့နှင့် ညွှန်ကြားချက်အရ ဘုန်းတော်ကြီး ကာလ်ချီသည် မြန်မာပြည်ကက်သလခ်သာသနာကို ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ရလေသည်။ ဦးစွာပထမ မြန်မာပြည်သာသနာအခြေအနေ အရပ်ရပ်များကို အသေးစိပ်လေ့လာစိစစ်သည်။ ထိုနောက်ဘုန်းတော်ကြီး ဗီတိုးနီ အား အထက်မြန်မာပြည်ရှိ သာသနာကိုလည်းကောင်း၊ မိမိမှာ အောက်မြန်မာပြည်ရှိ သာသနာကိုလည်းကောင်း၊ အသီးသီးတာဝန်များခွဲဝေ၍ သာသနာလုပ်ငန်း ရပ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်သည်။
ဘုန်းတော်ကြီး ကာလ်ချီ မြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိချိန်သည် မြန်မာမင်း တနင်္ဂနွေမင်း (၁၇၁၃-၁၇၃၃) အုပ်စိုးချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်၌ မြန်မာပြည်၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများတွင် တရုတ်-မြန်မာတို့ နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှု့များ တင်းမာနေချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သော တင်းမာမှု့များဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပင် နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများလည်း မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာပြည်သို့ကြွရောက်လာခဲ့ကြသော သာသနာပြုဘုန်းတော်ကြီး အသစ်နှစ်ပါးကို ၀မ်းပန်းတသာ ကြုဆို လက်ခံခဲ့ကြသည့် လူစုများရှိကြသလို၊ မလိုလားမနှစ်မြို့ကြသော အုပ်စုကလဲရှိသေး၏။ ထိုမလိုလားကြသော အုပ်စုမှ ဘုန်းတော်ကြီး အသစ်နှစ်ပါးအား အနှောင့်အယှက်များပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ တိုင်းတပါး တရုတ်ပြည်မှ ၀င်ရောက်လာကြသော ကက်သလခ် ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါး တို့သည် နိုင်ငံရေးပယောဂများနှင့် မကင်းရှင်းကြောင်းကို ကောလဟာလလုပ်ကြံ သတင်းများဖြန့်ဝေ ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် တရုတ်ပြည်မှ စေလွှတ်လိုက်သော သူလျှုများဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ သာသနာ အကြီးအကဲများ၏ သပိတ်မှောက်ခံဘုန်းတော်ကြီးများဖြစ်ကြောင်း၊ စသည်တိုိ့ကို စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ပြောဆိုနေကြသော ကောလဟာလသတင်းများသည် များမကြာမီမှာပင် ဘုရင့်နန်းတော်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။
တနင်္ဂနွေဘုရင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင် တိုင်းတပါးမှ ရောက်ရှိလာကြသော ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးကို
ဆင့်ခေါ် စစ်ဆေးမေးမြန်းတော့၏။ အောက်မြန်မာပြည်၌ သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူသော ဘုန်းတော်ကြီး ကာလ်ချီသည် ဘုရင်မင်းမြတ်၏ ဆင့်ခေါ်ခြင်းကို အချိန်မဆိုင်းမတွဘဲ အစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကိုခံယူရန် အင်းဝနေပြည်တော်ရှိရာ အထက်မြန်မာပြည်သို့ ဆ်ိုက်ရောက်လာခဲ့သည်။ ဘုရင်မင်းမြတ်နှင့်တွေ့ဆုံခါ အစစ်ဆေးခံယူပြီးနောက်၊ မိမိတို့မှာ သာသနာပြုပုဂ္ဂုလ်များ သက်သက်ဖြစ်ကြောင်း အထင် အရှားပေါ်လွင်နေသဖြင့် အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမှ ကင်းလွတ်သည့်အပြင် မြန်မာဘုရင်မင်းမြတ်ထံမှ မမျှော်လင့်သော အခွင့်အလမ်းများကိုပင် ထပ်လောင်းရရှိခံစားကြရသည်။
တနင်္ဂနွေဘုရင်မင်းမြတ်သည်လည်း ပြည်ပမှရောက်ရှိလာကြသော သာသနာပြုနှစ်ပါးတို့အပေါ် သံသယစိတ်များ ကင်းရှငိးသွားသည်နှင့်အမျှ မြန်မာဘုရင်မင်းမြတ်တို့၏ စိတ်ထားမြတ် အစဉ်အလာ ရှိသည့်အတိုင်း ယင်းတို့ကိုမြန်မာပြည်အတွင်း လွတ်လပ်စွာသွားလာနေထိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ သာသနာပြုပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ဘုရားကျောင်းကန်များဆောက်လုပ်ခွင့်များ ကို ပေးသနားတော်မူခဲ့သည်။ ထိုပြင် အင်းဝနေပြည်တော်၌ အမြောက်တပ်တွင် စစ်မှု့ ထမ်းနေကြသော ပေါ်တူဂီ အမျိုးသားများအတွက် ဘုရားဝတ်တက်ရန်ကျောင်း တစ်ဆောင်ကိုလည်း ဘုရင်မင်းမြတ် ကိုယ်တော်တိုင်ကပင် ဆောက်လုပ်စေခဲ့လေသည်။ ထိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်အတူ သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီးများလာရောက် သတင်းသုံးနေထိုင်ရန် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ကိုလည်း ဆောက်လုပ်စေခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဘုရင်မင်းမြတ် အမိန့်ရှိတော်မူသော ဘုရားကျောင်းဆောင်များနှင့်အတူ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောင်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာတော်မှ ကုန်ကျခံယူစေရန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအား အမိန့်တော်ရှိခဲ့လေသည်။
ဘုန်းတော်ကြီး ကာလ်ချီသည် ဘုရင်မင်းမြတ်အမိန့်တော်ရှိတော်မူသည့်အတိုင်း အဆိုပါကျောင်းဆောင်များ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် မိမိကိုယ်တော်တိုင် စီစဉ် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက် ခဲ့လေသည်။ ထိုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ထမ်းရွက်နေခိုက် အထက်မြန်မာပြည်ရှိ သာသနာနယ်မြေတခွင်သို့လည်း လှည့်လည်ကြည့်ရှု့ခဲ့သည်။ သာသနာလုပ်ငန်းများကို ထမ်းဆောင်ရင်း၊ တဖက်တလမ်းမှလည်း မြန်မာစာ၊ ပါဠိစာပေများကို လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
ဘုန်းတော်ကြီးကာလ်ချီ၏ အီတလီပြည်ရှိ ဘားရ်နားဘိုက်အသင်းဂိုဏ်းချုပ်ကြီးထံသို့ ပေးပို့စာ(၈)
၁၇၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၁) ရက်။
ကိုယ်တော်အထံသို့ စီရင်ခံစာပေးပို့လိုသည်မှာ အချိန်အခါအားဖြင့် ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီဘုရား၊ အခုလို အခွင့်အခါကောင်း ကြုံကြုက်ရရှိခဲ့လို့လည်း ၀မ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ သာသနာလုပ်ငန်းခွင် အပေါ်ဘုရားသခင်ချလောင်းပေးတဲ့မဟာကျေးဇူးတော်တွေကတော့ ကြီးမားလှ ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်များကို ချီးမွမ်းမဆုံးဖြစ်နေရပါတယ်ဘုရား။
(၈) I THE VOICE (Catholic Monthly- Rangoon). 1913 pg.83-85
II BIBLIOTHECA CATHOLICA BIRMANA. By Rev.S.M. Hosten S.J And E. Luce. British Burma Press. Rangoon. 1915
III. Lettera da Ava, 11 marzo 1723. GALLO, 0p.cit.Vol.I Appendice 1,p.185.
တပည့်တော်ကိုယ်တိုင် အင်းဝနေပြည်တော်ရဲ့ ဘုရင်မင်းမြတ်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဂါရ၀ပြုခဲ့ပါပြီဘုရား။ တပည့်တော်တို့ရဲ့ သာသနာရေးလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကို ဘုရင်မင်းမြတ်အား တင်ပြဆွေးနွေး ခဲ့တဲ့အခါ၊ ဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ စိတ်သဘောထားကြည်ဖြူစွာနဲ့ ကြုဆို လက်ခံခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ တင်ပြဆွေးနွေးချက်တွေကို လက်ခံရုံမျှမကသေး ဘုရင်မင်းမြတ် ကိုယ်တော်တိုင်က ဘုရားဝတ်ပြုတက်ရန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆောင်များ စတင်ဆောက်လုပ်ဘို့ တပည့်တော်တို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ အဆောက်အဦးများရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များ ကိုလည်း ဘုရင်မင်းမြတ်က ချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါသေးတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်လည်း နောက်တနေ့မှာဘဲ ဆောက်လုပ်ရမဲ့ကျောင်းဆောင်သစ်များအတွက် ပုံစံငယ်တွေရေးဆွဲပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယါဘုရား။
ဘုရင်မင်းမြတ်ကလည်း အမိန့်တော်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်ဘုရား။ ဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ ခရစ်ယာန် တိုင်းပြည်များနှင့် ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ ဆက်သွယ်လိုတဲ့ ဆန္ဒရှိကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရား။
အထူးသဖြင့် တပည့်တော်တို့ရဲ့ သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ရွှေလမ်း၊ ငွေလမ်းများဖေါက်သွယ်ခါ ရင်းနှီး ချစ်ခင်စွာ အဆက် အသွယ်ပြုလုပ် လိုကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သို့ သာသနာပြုပုဂ္ဂုလ်များကိုလည်း ထပ်မံစေလွှတ်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ သို့သော် မိမိအနေဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်စုံသော သာသနာပြုပုဂ္ဂုလ်များကိုသာလျှင် လိုလားလျက်ရှိပါကြောင်း၊ တပည့်တော်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ်က မိန့်မှာပြောဆိုခဲ့ပါသည်ဘုရား။
ဘုရင်မင်းမြတ်လိုလားတောင့်တတဲ့ သာသနာပြုပုဂ္ဂုလ်တွေဟာ ပန်းချီအနုပညာသည်များ၊ အထည်အလိပ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု့လုပ်ငန်း၌ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဖလ်မှန်၊ သတ္တုလုပ်ငန်း အတတ်ပညာရှင်များ၊ နက္ခဗေဒပညာရှင်များ၊ သဘာဝပထ၀ီ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ အစရှိတဲ့ အတတ်ပညာ၊ အသိပညာရှင်များ ဖြစ်စေလိုပါတယ်ဘုရား။ အချုပ်အားဖြင့် တင်ပြရမယ်ဆိုရင် ဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ မိမိတိုင်းပြည်မှာရှိကြတဲ့ ပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့အကျုးကို သယ်ပိုးထမ်းရွက်ပေးနိုင်မယ့် အရည်အသွေးရှိ သာသနာပြုပုဂ္ဂုလ်များကို လိုလားတောင့်တလျှက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြ လာပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့မှလည်း၊ တပါးပါးကို နေပြည်တော်ကြီးမှာဘဲ သီတင်းသုံးနေထိုင်စေလို ပါတယ်ဘုရား။ ကျန်ရှိတဲ့ တပါးကိုတော့ သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထံ မြန်မာသံတမန် အဖြစ်စေလွှတ်လိုက် လိုကြောင်း ဘုရင်မင်းမြတ်က တပည့်တောကို မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ အဲဒီတော့ ဘုရင်မင်းမြတ်အမိန့်တော်ရှိတဲ့အတိုင်း ဘုန်းတော်ကြီး ဗီတိုးနီကို သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ထံသို့ မြန်မာသံတမန်အဖြစ်စေလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘုရား။ ဘုရင်မင်းမြတ် ကိုယ်တော်တိုင် ပါးလိုက်တဲ့ လက်ဆောင်မွန်တွေကိုလည်း ဘုန်းတော်ကြီးဗီတိုးနီနှင့် တပါးတည်း ထည့်ပေးပြီး ရဟန်းမင်းကြီးကို ဆက်ကပ်လိုက်ပါတယ်ဘုရား။ ဘုရင်မင်းမြတ်ပါးလိုက်တဲ့ လက်ဆောင်မွန်တွေကတော့ ပတ္တမြား၊ နီလာ အစရှိတဲ့ကျောက်မျက်ရတနာတွေနှင့် အခြား အဖိုးတန် ရတနာတွေဘဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလက်ဆောင်မွန်တွေကိုလည်း ရွှေချည်ထိုးနဲ့ ယက်လုပ်ထားတဲ့ အိပ်ငယ်လေးထဲမှာ ထည့်ပြီး၊ ရဟန်းမင်းကြီးထံ ဆက်သလိုက်ပါတယ်ဘုရား။ ဘုရင်မင်းမြတ် အနေနဲ့လည်း သာသနာပိုင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအား အရပ်လေးမျက်နှာတခွင်မှာ အမြင့်မြတ်ဆုံး သိက္ခာတော်ရှိ ပုဂ္ဂုလ်တပါးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလျက် အထူးပင်ကြည်ညုလေးစားပါကြောင်း၊ ရဟန်းမင်းကြီးအား သိသာစေရန်လျှောက်ထားဘို့ ဘုန်းတော်ကြီးဗီတိုးနီအား မှာကြားလိုက်ပါတယ် ဘုရား။ အမှန်တကယ်မှာတော့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအထံတော်သို့ တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ဘဲ လာရောက်လျှောက်ထား အစီရင်ခံဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အဲဒီလိုခရီးထွက်ခွာခဲ့ရမယ်ဆိုရင် တပည့်တော် ယူထားတဲ့ တာဝန်တွေဖြစ်တဲ့ သာသနာလုပ်ငန်းဝတ္တရားတွေ လစ်ဟင်းသွားမည်ကို စိုးရိမ်ရပါသဖြင့် ကိုယ်တိုင်လာရောက် အစီရင်ခံခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းပါဘုရား။
ကိုယ်တော်ဘုရားကို ဆက်လက်လျှောက်ထား ရအုံးမယ်ဆိုရင်၊ ဒီတိုင်းပြည်ဟာ သယံဇာတ ပေါများကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး တခုဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။ ရွှေ၊ငွေ၊ ကျောက်သံပတ္တမြား၊ သတ္ထု၊ ကြေး၊ ခဲ၊ ဆေးမြစ်စုံ၊ အစရှိတဲ့ ဘုရားပေးအဖိုးတန် ရတနာအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။ ဒါပေမဲ့ ဒီအဖိုးတန် ရတနာပစ္စည်းတွေ အားလုံးဟာမြေအောက်မှာ သာလျင် ရှိကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူများအနေနဲ့ အဲဒီအဖိုးတန် ရတနာတွေကို လက်ဝယ်ရောက်အောင် ဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိကြတဲ့ အနောက် တိုင်းသားတွေဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရင်မင်းမြတ်အနေနဲ့ အထူးလိုလားတောင့်တလျက် ရှိပါကြောင်းပြောကြား လိုပါတယ်ဘုရား။ ရှေးလွန်လေပြီးတဲ့ အချိန်အခါတည်းက ဒီတိုင်းပြည်ဟာ အရှေ့ဖျားတခွင်မှာတော့ အချမ်းသာဆုံး၊ အကြွယ်ဝဆုံး တိုင်းပြည်တပြည် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယိုးဒယားနဲ့ စစ်မက်ဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှု့ရေး အခြေအနေတွေဟာ ကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဘုရား။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ လူမှု့ဆက်ဆံရေးတွေကတော့ အထူးကိုဘဲ ပျူပျူငှါငှါရှိကြပြီး များစွာချီးမွမ်းဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ကောင်းလှပါတယ်ဘုရား၊ မြန်မာတတွေဟာ စေတနာတရားနဲ့ ပြည့်ဝကြသူ များဖြစ်ကြပြီး၊ လူမှု့ရေးရာမှာလည်း ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှု့တွေက ချီးမွမ်း မဆုံးနိုင်လောက် အောင်ကောင်းမွန်လှပါတယ်ဘုရား။ မြန်မာတို့ဟာ စိတ်သဘောထားဖြူစင်ကြတယ်၊ အစွဲအလန်း ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ တယူသန်စိတ်ထား မျိုးလည်း မရှိကြပါဘူး ဘုရား။ နောက်ဆက်လက်ပြီး ပြောပြရအုန်းမယ်ဆိုရင် တပည့်တော်တို့ရဲ့ သာသနာမှာတွေ့ ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ကတော့ တရုတ်ပြည်မှာလောက်တော့ ပြသနာတွေမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မြန်မာပြည် သာသနာနယ်မြေ အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု့အသစ်တွေ ထပ်လောင်း ချမှတ်ပေးဖို့ လျှောက်ထားလိုပါတယ် ဘုရား။ ဒီလိုအားပေးမှု့တွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီသာသနာ ကလေးဟာ တပည့်တော် တို့အသင်းဂိုဏ်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ သာသနာ တခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ဘုရား။ တပည့်တော်ကိုလည်း သာသနာပြန့်ပွားရေး ဌာနချုပ်က ဒီသာသနာရဲ့ ကြီးကြပ်ရေးမှုး အဖြစ် ခန့်အပ်ထားတယ်ဆိုတော့ နောင်အခါမှာလည်း တပည့်တော်တို့ကိုဘဲ ဆက်လက်ပြီး တာဝန်ပေးအပ်သွားမယ်ဆိုတာ ယုံမှားဖွယ်မရှိနိုင်ကြောင်း တပည့်တော် ယုံကြည် စိတ်ချစွာနဲ့ လျှောက်ထားလိုပါတယ်ဘုရား။
အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြလိုတဲ့ အကြောင်းကိစ္စကတော့ ဘုရားသခင်သာလျှင် အသိဆုံးဖြစ်တဲ့ တပည့်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကိစ္စတခုဖြစ်ပါတယ်။ တပည့်တော်တို့ ရောက်မလာမီ ခပ်စောစောပိုင်းတုံးက ယိုးဒယားပြည်ကနေ ပြင်သစ်အမျိုးသား သာသနာပြုနှစ်ပါးတို့ဟာ ဒီတိုင်းပြည်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ဘူးကြပါတယ်။(၉) ဒီသာသနာပြု
(၉) JEAN GENOUD AND JEAN JORET. “In 1692 (these two priests) are dispatched by the Society of Foreign Missions at Paris..thrown into Pegu river on 12th February 1693.” (Cf. An Account of the Roman Catholic Mission of Southern Burma and of the New Cathedral”. By Bishop Bigander. 1887. See Ch.1. pp.2ff.
နှစ်ပါးတို့ဟာ ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ ပေါ်တူဂီတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ဘဲ ကွပ်မျက်ခံလိုက်ကြရပါတယ်။ တပည့်တော်တို့ အပေါ်လည်း ဒီအတိုင်းလုပ် ဘို့ သူတို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့်တပည့်တော်တို့ဟာ အသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကင်းဝေးခဲ့ကြရပါတယ်။ တပည့်တော်တို့ အပေါ်ဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ အထင် အမြင်မှားခဲ့မှု့တွေ အားလုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွား ခဲ့ပါတယ်ဘုရား။တပည့်တော်တို့ကို လွတ်လပ်စွာသာသနာပြုဘို့ အခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရောက်ခါစတုံးက တပည့်တော်တို့ကို တရုတ်ပြည်က သူလျှိုတွေ၊ နိုင်ငံရေးခြေရှုပ်သူတွေ၊ တရားခံပြည်ပြေးတွေ၊ အသင်းတော်က သပိတ်မှောက်ထားသူတွေ၊ သီလကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလို့ စသဖြင့် အမျိုးမျိုး စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရင့်နားတော်ထိ ပေါက်ကြားသွားအောင်လည်း လုပ်ကြံပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှု့တွေက ဒီကောလ ဟာလသတင်းတွေ လွှင့်ထုတ်ကြသူတွေကို အဖြစ်မှန်ထုတ်ပြလိုက်သလိုဘဲ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ ဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ တပည့်တော် တို့အပေါ်ပိုမိုရင်းနှီးမှု့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ တပည့်တော်တို့ကို နောင်အချိန်မှာ အနှောက်အယှက် မပြုရဟုလည်း အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ ပါတယ်ဘုရား။ ဒါ့အပြင်တပည့်တော်တို့ကို လွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာသွားလာနေထိုင်ခွင့်၊ ဘုရားကျောင်းကန်များကို တည်ဆောက် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အစရှိတဲ့သာသနာအတွက်လိုအပ်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းဆောင်တွေကို ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း လိုအပ်တဲ့ အကူအညီများကို ပေးကြဘို့ပြည်သူများအား အမိန့်တော်ရှိခဲ့ပါတယ် ဘုရား။
ဒီသာသနာအတွက် သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များကို စေလွှတ်တဲ့အခါမှာ သေချာစိစစ်ရွေးချယ်ပြီး စေလွှတ်ပေးဘို့ တပည့်တော်လျှောက်ထား လိုပါတယ်ဘုရား။ ဒီတိုင်းပြည်ကိုလာကြမယ့် သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များဟာ သာသနာပြုစိတ်ဓာတ် အပြည့်အ၀ရှိထားကြဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအကျင့်သီလသိက္ခာနှင့် သမာဓိ တည်ကြည်မှု့ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဘို့ အထူး လိုအပ်ပါတယ်။ စေတနာမေတ္တာ တရားပြည့်ဝသူ တွေဖြစ်ကြဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့နှင့်အတူ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ အခြား သဘာဝ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ ပုံဆွဲစာအုပ်များ၊ အစရှိတဲ့ စာအုပ်အမျိုးမျိုးကိုပေးပို့စေလို ပါတယ်ဘုရား။ ဒါအပြင်၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးပုံစံများ၊ ပထ၀ီသမိုင်းစာအုပ်များ၊ ဓမ္မသီချင်း စာအုပ်များ၊ ပေါ်တူဂီဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ အစရှိသည့် စာအုပ်မျိုးစုံကိုလည်း ပေးပို့ပါရန် ကိုယ်တော်အားကြိုတင် အကြောင်းကြားမေတ္တာ ရပ်ခံထားအပ်ပါသည်ဘုရား။
သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များဟာ၊ သာသနာနယ်မြေများရှိရာကို မလာရောက်မီ၊ ဂျီသြမေတြီဘာသာရပ်၊ နက္ခဗေဒဘာသာရပ်၊ သင်္ချာ ဘာသာရပ်၊ လက်သမားအတတ်ပညာ၊ ဆည်မြောင်းဆောက်လုပ်ရေး အတတ်ပညာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာ၊ အစွမ်း ကုန်ပြောရမယ်ဆိုလျင် ပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝပြီး၊ အတတ်ပညာရှင်များဖြစ်ကြဘို့ လိုအပ်ပါတယ်ဘုရား။ ဒါ့အပြင်အချက်အပြုတ်က အစ၊ ယိုထိုးနည်းတွေပါမကျန် တတ်ကျွမ်းထားကြတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာအထူးဘဲ တန်ဖိုးကြီးမားလှပါတယ် ဘုရား။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အတွက်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ချိန်မှာ အသုံးပြုဘို့ ထပ်လောင်းမှာကြား လိုပါသေးတယ်ဘုရား။ ဘုရားရုပ်ပုံကားချပ်များ၊ အခြားဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းများ၊ အစရှိတဲ့အရာတွေ လက်လှမ်းမှီသလောက်စုဆောင်းပြီး သယ်ဆောင် ယူလာစေလိုပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်အခု မှာကြားလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ ဒီမှာ အလွန် ရှားပါး ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြသလို၊ လူတွေအနေနဲ့လည်း အထူးလိုလားတောင့်တကြတဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြပါတယ် ဘုရား။ တပည့်တော်ရဲ့ နယ်မြေမှာဘာသာဝင်ဦးရေးကတော့ သိပ်ပြီး မများလှသေးပါဘူး ဘုရား။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်နဲ့ဆိုရင် မကြာခင်မှာ တိုးလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်ဘုရား။ အဲဒီတော့မှဘဲ အဖိုးတန်တဲ့ သာသနာ့ သားကောင်း ရတနာတွေ များပြားလာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်ကိုးရပါတယ်ဘုရား။
ကိုယ်တော်ကိုစာနဲ့ဘဲရေးသားအစီရင်ခံရတဲ့အတွက် တပည့်တော်အားမလို အားမရဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ အခုလိုရေးသားပေးပို့လိုက်တဲ့ သတင်းတွေကိုလည်း စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဖတ်ကြားစေလို ပါတယ်ဘုရား။ တကယ်မှာတော့ တပည့်တော်အနေနဲ့ ဒီထက်မကရေးစရာ တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်ဘုရား။ ဒါပေမယ့်သမ္မာန်တွေကလဲ ထွက်ခွာကြဘို့ စိုင်းပြင်းနေကြပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက် ဒီလောက်နဲ့ဘဲ အစီရင်ခံလိုက်ရပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်လည်း လုပ်ငန်းတွေကများပြားနေတော့ ပရိတ်မေတ္တာ ဆိုဘို့တောင် မနည်းအချိန်လုနေရပါ တယ်ဘုရား။
ဒီ၊ စီဂျစ်မွန်ဒို ကာလ်ချီ
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:31 PM